Mampifandray ireo mpampianatra 5.000 amin’ireo mpianatra ao anatin’ny sehatra antserasera vaovao ireo mpikaroka momba ny teknolojia ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Mampifandray ny mpampianatra amin'ny skajim-pianatra rehetra ny Smartclass
Voadika ny 09 Aogositra 2019 5:54 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, English, Français, English
Adam A. Duma, mpiara-manorina ny Smartclass, sehatra fianarana amin'ny aterineto, mampiseho amin'ny finday ny Smartclass nandritra ny tafatafa. Saripikan'i Goodhope Amani, nahazoana alalana.
Nanambara fampianarana maimaim-poana ho an'ny sekoly manomboka amin'ny ambaratonga voalohany ka hatramin'ny ambaratonga faharoa ny governemanta Tanzaniana, saingy mijanona ho adihevitra goavana eo amin'ny fiarahamonina Tanzaniana ny kalitaon'ny fampianarana.
Manantena ny hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny alàlan'ny teknolojia ireo mpikaroka momba ny teknolojia ao Tanzania, manararaotra ny zava-misy fa ao amin'ny aterineto ny 45 isanjaton'ny Tanzaniana ary mihamitombo izany isa izany.
Tamin'ny Janoary 2019, nanamboatra ny Smartclass, sehatra antserasera fampianarana izay mampifandray ireo mpampianatra tsy miankina sy mahay miaraka amin'ireo mpianatra sy olona hafa liana amin'ny fahazoana fahalalana isan-karazany ilay mpikaroka momba ny teknolojia, Adam A. Duma. Nilaza i Duma, mpiara-manorina ilay sehatra fa vokatry ny fikarohana goavana no nisian'ny sehatra Smartclass, fikarohana izay nahitana fa miady mafy ny ankamaroan'ny ray aman-dreny mba hahazoana mpampianatra mahay ho an'ny zanak'izy ireo amin'ny taranja samihafa – indrindra ireo taranja ao amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa. Hoy izy:
“Ny Smartclass dia sehatra antserasera iray izay mampifandray ireo mpampianatra matihanina indrindra sy azo itokisana indrindra amin'ireo mpianatra samihafa amin'ny sehatra samihafa. Mpianatra avy amin'ny sekoly manofana ho mpampianatra, mpianatra fisantarandraharaha, mpianatra amin'ny sehatry ny fahasalamana, fambolena ary sehatra hafa mihoatra ny 300″.
Ny sehatra, mbola eo am-pikotrehana ao amin'ny Oniversite Dar es Salaam, dia manome hirika ho an'ireo mpampianatra matihanina mba hivarotra ny fahaizany amin'ny vidiny 3000 Shillings Tanzaniana farafahakeliny (1.30 Dolara Amerikana) isaky ny adiny iray. Efa nahasarika mpampianatra 5000 sy mpianatra 7000 sahady izany nanomboka tamin'ny niasany.
Mba hiantohana fa azo itokisana ny fahaizan'ny mpampianatra, dia mifandray amin'ny ivon-toeram-pampianarana hafa ny sehatra mba hanamarinana ny mombamomba azy ireo.
“Manampy amin'ny fandrefesana ny fahaizan'ny mpampianatra ny teknolojia Artificial Intelligence (AI) satria tsy afaka manamarina ireo taratasy mari-pahaizana isaky ny mpampianatra izahay. Manana angon-drakitra mifandray amin'ny Vaomieran'ny Fanadinana Nasionaly ao Tanzania (NECTA amin'ny teny Anglisy), sy ny Universiten'i Dar es Salaam, izahay, koa manampy amin'ny fanamarinana ireo vaovao ireo ny AI. Miasa mba hampifandray ireo ivon-toeram-pampianarana maro izahay mba handraisana olona maro, “hoy i Duma.
Miara-miasa amin'ny ekipany ihany koa i Duma mba hamahana ny olana sasany izay misy eo amin'ireo mpampianatra mahay sy ny mpianatra. Ohatra, mangataka mpampianatra ny mpianatra sasany ary manafoana tampoka indray ny fangatahana rehefa eny an-dalana ho any amin'ilay mpianatra ny mpampianatra.
“Olana iray hafa [atrehinay]: Tsy mandray tsara ny mpianatra [mandritra ny fianarany] ka mangataka azy ireo mba hifantoka izahay. Miatrika fanamby [amin'ny] mpianatra sy mpampianatra izahay satria samy … mpanjifanay ny roa tonta. Tsarovy fa rehefa lasa mpampianatra ianao, dia lasa mpianatra ho azy – satria tsy afaka mijanona … mianatra ianao. “
Duma, mpiara-manorina ny Smartclass, Adam A. Duma, manome fanazavana momba ny sehatra ho an'ny mpiysidika mandritra ny Foara Iraisam-pirenena momba ny Varotra tao Dar es Salaam, Jolay 2019. Sary nahazoana alalana avy amin'i Adam A.
Manova ny tontolon'ny fianarana
Nanova ny fomba fianaran'ny olona any Tanzania ny aterineto. Satria mihamaro ny olona miditra antserasera, manokatra varavarana mankany amin'ny fomba vaovao fianarana ihany koa ny fidirana ao amin'ny Tutorial YouTube, Slide Share, Google Scholar, Academia, saingy tsy nahasolo ny tombontsoa amin'ny fihaonana mivantana amin'ny mpampianatra mahay. miampy ny fianarana an-tserasera izany.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nampiasa vola tamin'ny fanentanana ny tanora hampiasa ny teknolojia sy ny aterineto ny governemanta Tanzaniana mba hanavao tetikasa izay manampy amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Ny Vaomieran'i Tanzania momba ny siansa sy ny teknolojia ( Costech), ohatra, mampiasa toeram-pihaonana Fanavaozana isankarazany toy ny Buni Hub, izay mampiroborobo ny fanavaozana eo amin'ny teknolojia sy ny fandraharahana. Tamin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra lasa teo, nikarakara hetsika lehibe tany Dar es Salaam, renivohitry ny kolontsain'i Tanzania ny Sahara Sparks, orinasan'ny teknolojia sy fanavaozana, ka marobe tamin'ireo start-ups ara-teknolojika no nanana hirika nampiseho ny hevitr'izy ireo ary nahazo fanampiana mankany amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy.
Araka ny tatitra nataon'ny Tanzania Communication Regulatory Authority (TCRA) 2017 momba ny fampiasana ny aterineto, 45 isanjaton'ny Tanzaniana no mavitrika mampiasa aterineto ary mihoatra ny 51 isanjato — 23 tapitrisa amin'ny olom-pirenena 45 tapitrisa — amin'izao fotoana izao no miditra amin'izany. Matoky i Duma sy ny ekipany ahitana olona 14 fa mahabe fanantenana ny hoavin'i Tanzania, satria fantatra fa betsaka ny olona hiditra an-tserasera hitady fomba hanatsarana ny fahaizany sy hampitombo ny famokarana.
“Tena ambany ny fampiasana ny aterineto; tsy mampiasa fonosana [angon-drakitra marobe] hidirana amin'ny Smartclass izahay — mijanona ho an'ny olona tsy afaka miditra aterineto ny olana. Mifantoka amin'ny fananganana endri-javatra ivelan'ny aterineto izay hahafahan'ny olona miditra amin'izany izahay ankehitriny.
Adam A. Duma ao amin'ny biraony. Sary avy amin'i Goodhope Amani, nahazoana alalana.
Mikatsaka ny hanova an'i Tanzania ho «fiarahamonina mifototra amin'ny fahalalana» amin'ny alàlan'ny fampiharana ny TIC ny politikam-pirenena momba ny TIC 2016 ao Tanzania. Miasa mafy ny orinasan'i Duma hamaha ireo fanamby rehetra mifandraika amin'ny sehatra vaovaon'izy ireo mba ho samy afa-po na ny mpampianatra na ny mpianatra.
Manova ny tontolon'ny fianarana ao Tanzania ny Smartclass — azo idirana maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny maha-mpampianatra na maha-mpianatra. Amin'ireo olom-pirenena maro ankehitriny ao amin'ny findain'izy ireo, afaka mivarotra mora foana ny fahaizan'izy ireo sy mahazo vola ny mpampianatra, ary afaka ho lasa marani-tsaina ara-bakinteny ny mpianatra — amin'ny alàlan'ny fampiasana ny findain'izy ireo.